Sawirro:-Soomaaliya Oo Markii Ugu Horeysay Ka Qeyb Noqotay Shirweynaha Caalamiga Ah Ee Wadamada Shidaalka Soo Saara - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Sawirro:-Soomaaliya Oo Markii Ugu Horeysay Ka Qeyb Noqotay Shirweynaha Caalamiga Ah Ee Wadamada Shidaalka Soo Saara
Sawirro:-Soomaaliya Oo Markii Ugu Horeysay Ka Qeyb Noqotay Shirweynaha Caalamiga Ah Ee Wadamada Shidaalka Soo Saara
July 11, 2017 Saadaq Laki542
Wafdiga Shirkaan Soomaaliya uga qeybgalaya ayaa waxaa hoggaaminaya Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Batroolka & Macdanta Mudane Maxamud Cabdulqaadir Warsame, waxaana qeyb ka ahaa Qubaro dhinaca soosaarista Batroolka ah.
Wafdiga Wasaaradda Batrolka iyo Macdanta oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaaladda Istanbul ayaa intii uu shirku socday waxa ay si gooni gooni ah shirar garab socda Shirweynaha Balroolka Dunida ay la qaateen Madax badan oo ay ka mid ahayeen Wasiirka Tamarta & Kheyraadka Dabiiciga iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda dalka aan walaalaha nahay ee Turkiga.
Wafdiga Soomaaliya waxaa uu sidoo kale si gaar gaar ah u qaabilay Madax ka socotay wadamada Qatar, Azarbajan, America, Albania, Serbia iyo kuwo kale.
Waa markii ugu horeysay oo ay Soomaaliya si rasmi ah ugu biirto dowladaha ku bohoobay Shirweynaha Joogtada ah ee Wadamada Batrolka Soosaara iyo kuwa rajada dhaw ka qabo in ay soo saaraan.
Shirkan oo socondoona shan maalmood ah ayaa lagu wadaa in la isku dhaafsado afkaar iyo fikrado la xiriiro sidii loo horumarin lahaa hanaanka soosaarista Batroolka iyo Suuq-geyntisa iyada oo Soomaaliya si rasmi ah ay uga mid noqotay Shirweynaha Wadamada Shidaalka soosaara, iyada oo taasi ay ka dambeysay dadaal ay Madaxda Wasaaradda Batrolka iyo Macdanta Dalkeenu u galeen arrintan iyada ay kaalin mug lehna ka geysatay dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga.
Waxaa lagu wadaa in Shirweynah Batroolka Istalnul la soo gabagabeyn doono 13 ka July, iyadoo wafdiga Soomaaliya ay fursad weyn u heleen in ay si gaar gaar ah u arkaan Shirkadaha Shidaalka Soosaare ee ugu waaweyn dunida oo ay ku jiraan kuwo horey Soomaaliya u siisay ruqsad rasmi ah.
SAWIRO;-Qalabka Hawada somaliya lagu maamulayo oo si Rasmiya loo rakibayo
Madaxweyne farmaajo oo khudbad kajeediyay shirka gaarka ah ee geeska africa
Farmaajo oo ka qayb galaya Caleemasaarka Uhuru Kenyatta
November 27, 2017 Cali Yare